थाहापाइराख्नुहोस ! सिरानी मुनि लसुन राखेर सुत्दाका यस्ता फाइदा हुन्छन्::Leading Nepal News
थाहापाइराख्नुहोस ! सिरानी मुनि लसुन राखेर सुत्दाका यस्ता फाइदा हुन्छन्
खानालाई स्वादिष्ट बनाउँन बाहेक लसुनलाई केही घरेलू उपचारमा पनि प्रयोग गरिँदै आएको छ ।यो स्वास्थको लागी निकै लाभदायक मानिन्छ । यति मात्र होइन लसुनको आफ्नै परम्परागत महत्व पनि रहेको छ । जसले नकारात्मक शक्तिलाई भगाउन सक्छ । सिरानीमुनि लसुन राख्नुको आफ्नै मान्यता रहेको छ । सिरानी मुनि लसुन राखेर सुत्दा निन्द्रा पर्न गाह्रो हुने व्यक्तिलाइ निद्रा पर्न जान्छ ।लसुनको सल्फरयुक्त यौगिक र कडा सुगन्धको शान्त प्रभावले मिठो निन्द्रा लगाउँछ । त्यस्तै, सिरानीमा लसुन राख्नाले हामीमा दिनभरी सकारात्मक प्रभाव पार्नका साथै अर्को दिनको लागि रातभर ऊर्जा संकलन गर्छ । त्यस्तै मिठो निन्द्राका लागी एक गिलास दुधमा एक पोटी लसुनलाई ट्क्रा पारेर तीन मिनेटसम्म उमालेपछि सेलाउन दिनेएक चिनी चम्चा मह दुधमा मिसाएर पिउने गर्नाले निन्द्रा लाग्छ । तर तयार भएको दुध सुत्नु अघि पिउनु पर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस..गर्मीमा आइसक्रिम खाने बानी छ ? ख्याल गर्नुहोस् –गर्मी मौसम सुरु भएसँगै आइसक्रिम चुस्न कत्तिको सौखिन हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस तपाईले खाइरहेको आइसक्रिम अखाद्य पदार्थबाट बनेको त छैन ? बजारमा अखाद्य पदार्थ मिसिएका आइसक्रिमहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेका छन् । मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अखाद्य पदार्थ मिश्रण गरेर उत्पादित आइसक्रिम खुलेआम विक्रि वितरण भइरहेको पाइएको छ । सम समयमा अन्य खाद्ययबस्तुमा प्रशासनले अनुगमन गर्र्दै आएपनि आइसक्रिम, कुल्फी, बरफ लगायतमा अनुगमन गदैन् । आइसक्रिम बनाउन प्रयोग गरिने आइसिङ सुगर अर्थात एक प्रकारको केमिकल प्रयोग हुने र सो केमीकल प्रयोग भएमा मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । तर व्यापारीहरुले अत्यन्तै धेरै उक्त केमिकल प्रयोग गरेर आइसक्रिम बेचिरहेका छन् ।
आइसक्रिममा प्रयोग हुने स्किन मिल्क पाउडर, काष्टम पिठो, आरारोटको मात्रा नमिलाउँदा पनि आइसक्रिमले मानव स्वस्थ्यमा असर गर्ने डाक्टरहरुले बताएका छन् । खाद्यय विशेषज्ञ पशुपति मीश्रका अनुसार विभिन्न केमिकल र अखाद्य पदार्थ भएका आइसक्रिमहरु ब्जारमा भेटिन थालेका छन् । बजारमा पाइने आइसक्रिममा उत्पादन मिति र म्याद जाने मिति समेत नलेखिएका आइसक्रिम फेला पर्ने गरेको छ । अझ पूर्वी झापामा त यो समस्या निकै बढी छ ।आइसक्रिम तयारी गर्न दूध समेतको आवश्यकता पर्ने र उक्त दूध कसरी फटाइन्छ, दूध फटाउन कस्ता केमिकल प्रयोग गरिन्छ, आइसक्रिम बनाउन कस्तो कलर प्रयोग गरिन्छ, आइसक्रिमको कलर खान योग्य छ कि छैन भनेर समेत लेखाजोखा हुनुपर्ने बेला आएको खाद्यविद्हरू बताउँछन् । बढी केमिकल प्रयोग गरिएका आइसक्रिम, कुल्फी र पेय पदार्थको सेवनबाट बालबालिकालाई गम्भीर असर पर्ने खाद्यविद् मित्रले बताए । बजारमा आउने गरेका आइसक्रिमहरु ल्याब टेस्ट बिनानै बजारमा आउँछन् । तर ति कुल्फीहरूको ल्याब टेस्ट अनिवार्य मानिन्छ ।
डेंगुको संक्रमण देशभर बढ्दै ! यो कसरी सर्छ ? के भन्छन् चिकित्सक ?
तितेपातीका फाइदै फाइदा, यस्ता छन् तितेपातीका अपार गुणहरु…
के तपाईलाई ग्यास्ट्रिक छ ? त्यसोभए यी कुरामा अवश्य ध्यान दिनुहोला…
टिचिङ अस्पतालले पहिलो पल्ट गर्यो यस्तो कार्य…
यस्ता छन् उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने घरेलु उपाय….
घरेलु उपचारको लागि यसरी प्रयोग गर्नुहोस् तिते करेला….
पत्थरी हुनुअघि देखिन्छ यस्तो लक्षण, बेवास्ता नगरौँ…
हातका यी भाग दबाउँदा भाग्छन् यस्ता धेरै समस्या ..
के हाच्छिउँ रोक्दा ज्यानै जानसक्छ ? जानीराखौँ…..